Breast Conditions ရင်သား ကျန်းမာရေး – Mawlamyine Daily
Posted on July 3, 2018 by Mawlamyine Daily
Breast Conditions ရင်သား ကျန်းမာရေး
မော်လမြိုင်၊ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ သမီးအသက် ၂၈ နှစ်ပါ။ နို့မှာအကျိတ်စမ်းမိတာတော့ကြာပါပြီ။ အမြဲတမ်းလိုလိုစူးပြီနာပါတယ်။ ultrasound ရိုက်ကြည့်လိုက်တာ ဒီအဖြေထွက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဆက်ကုသရမလဲ ကျေးဇူးပြု၍အကြံပေးပါရှင်။ လေးစားစွာဖြင့်။ (အဖြေစာ Fibroadenoma Rt breast)
၂။ ဒါပေမဲ့ ရင်သားနာရင် အကျိတ်တွေ့ရင် eve 500, eposoft ပဲဆရာဝန်တွေကသောက်ခိုင်းတယ်။ အဲ ၂ ခုက အာနိသင်တူတူပဲလားဆရာ။
၃။ Fibroadenoma အကျိတ်နှစ်ခါခွဲပြီးပြီဆရာ။ နှစ်ဖက်လုံးမှာပါ။ နောက်ထပ်ထပ်မပေါ်အောင် ဘာဆေးများ မှီဝဲရမလဲ ညွှန်ကြားပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ။
၄။ Fibroadenoma က ခွဲစိတ်ပြီးရင် ပြန်ဖြစ်တတ်ပါသလားဆရာ။ မခွဲဘဲထားရင်ကော malignant change ဖြစ်ဖို့ chance များနိုင်ပါသလားဆရာ။
(၁) Benign lesions ကင်ဆာ မဟုတ်တာတွေ
• Breast Fibroadenoma (F/A) အသက် ၂ဝ-၃ဝ အပျိုရွယ်တွေမှာ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ရင်သားအကျိတ်။ နာလဲမနာဘူး။ အကျိတ်ကို သန့်သန့်လေး စမ်းလို့ရမယ်။ ဟိုဘက်-ဒီဘက်၊ အထက်-အောက် ရွေ့လို့ရတာမို့ ရင်သား Breast mouse ကြွက်လို့ ခေါ်ကြတယ်။
• Simple breast cyst ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ရင်သား-အကျိတ်။ အထဲမှာ အရည်ရှိနေမယ်။ အသက် ၃ဝ-၄ဝ အရွယ်တွေမှာ ဖြစ်တယ်။ နို့နာနိုင်တယ်။ နို့သီးအဖျားကနေ ညှစ်ရင် အရည်ထွက်နိုင်တယ်။
• Fibrocystic breast disease ကင်ဆာမဟုတ်ပါ။ ရာသီရက်တွေမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်မယ်။ အနေရ ခက်စေတယ်။
• Usual hyperplasia of the breast ရင်သားကို အသားစဖြတ်ယူ စစ်ဆေးကြည့်ရင် ကင်ဆာလို့ မတွေ့ရဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြွန် (ဆဲလ်) တွေက ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ များနေတယ်။ တချိန်မှာ ကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း များတယ်။
• Atypical hyperplasia of the breast ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ (ဆဲလ်) တွေကို နို့ပြွန်ထဲမှာရော နို့ထွက် အဆုပ်လေးတွေမှာပါ ရှိနေမယ်။ တချိန်မှာ ကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်း ၄-၅ ဆ များတယ်။
• Intraductal papilloma ကင်ဆာမဟုတ်ပါ။ နို့ပြွန်လေးတွေထဲမှာ ကြွက်နို့နဲ့ဆင်တယ်။ အပြင်ကစမ်းရင် အကျိတ်စမ်းလို့ရမယ်။ နို့သီးအဖျားကနေ အရည်တမျိုးမျိုး ထွက်မယ်။
• Adenosis of the breast ကင်ဆာမဟုတ်ပါ။ နို့ထွက်အဆုပ်လေးတွေမှာဖြစ်တယ်။ Mammograms (မင်မိုဂရမ်) ရိုက်ရင် ကင်ဆာနဲ့ဆင်နေမယ်။ Biopsy အသားစဖြတ်ယူစစ်ဆေးတာ လုပ်ရမယ်။
• Phyllodes tumor ရှားတယ်။ ကြီးလာတာမြန်တယ်။ Ultrasound ရိုက်ရင် Fibroadenoma နဲ့ ဆင်တူနေမယ်။ အသက် ၄ဝ ကျော်မှာ အဖြစ်များတယ်။ ကင်ဆာမဟုတ်တာရော ကင်ဆာပါဖြစ်နိုင်တယ်။
• Fat necrosis ရင်သားကို ထိခိုက်မိရာကနေ အထဲက အဆီ (တစ်ရှူး) တွေ ပျက်စီးတာဖြစ်တယ်။ စမ်းလို့တွေ့တဲ့ အကျိတ်ဟာ အမာရွတ်သာဖြစ်တယ်။
• Mastitis နို့နာ။ တခြားနေရာတွေမှာ အနာဖြစ်သလိုမျိုး နာမယ်၊ နီရဲနေမယ်၊ ဖေါင်းနေမယ်၊ ပူနွေးနေမယ်။ ကလေး နို့တိုက်ချိန်မှာ အဖြစ်များတယ်။ Breast abscess ပြည်တည်လာနိုင်တယ်။ ကိုယ်ပူမယ်။
• Breast calcifications နို့မာ။ (ကယ်လ်စီယမ်) ထုံးဓါတ်တွေ စုဝေးနေတာဖြစ်တယ်။ Mammograms ရိုက်ရမယ်။ ဆင်ဆာလဲဖြစ်နိုင်လို့ Biopsy အသားစ ဖြတ်ယူစစ်ဆေးတာ လုပ်ရမယ်။
• Gynecomastia ယောက်ျားနို့က မိန်းမနို့လိုဖြစ်နေတာ။ မွေးကလေးတွေမှာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ လူပျိုပေါက်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ စာရေးထားတယ်။
(၂) Breast cancer ရင်သားကင်ဆာ
• Malignant (Cancer) cells ကင်ဆာဆဲလ်တွေ မူမှန်ဖြစ်လာရင် ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ပွါးများလာမယ်။ ကိုယ်ခန္ခာ တခြားနေရာတွေဆီကို ပြန့်နှံ့စေမယ်။ အမျိုးသမီး သီးသန့်ရောဂါလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ယောက်ျားတွေလဲ မဖြစ်ဘူးတော့ မပြောနိုင်ပါ။ ရင်သား-ကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အကျိတ်၊ နို့သီးအဖျားက သွေးထွက်တာ၊ နို့အရေပြား အသွင်အပြင်-အရောင်ပြောင်းလဲခြင်းတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
• Ductal carcinoma in situ (DCIS) နို့ပြွန်ထဲမှာသာ ရှိနေသေးတဲ့ ကင်ဆာဆိုတာ ဖြစ်ရင် ကုသလို့ မခက်လှပါ။
• Lobular carcinoma in situ (LCIS) နို့ဖြစ်စေတဲ့ အဆုပ်လေးထဲမှာသာ ရှိနေသးတဲ့ ကင်ဆာဟာ ဘေးကို မပြန့်သေးပေမဲ့ နောင်တချိန်မှာ ဆိုးချင် ဆိုးလာနိုင်တယ်။
• Invasive ductal carcinoma နို့ပြွန်ကင်ဆာကတော့ နို့ထဲမှာတင် တခြားတစ်ရှူးတွေအထိပြန့်မယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာ တခြားနေရာတွေအထိ ရောက်ချင် ရောက်နိုင်တယ်။ ဆိုးတယ်။ အဖြစ်များတယ်။
• Invasive lobular carcinoma = နို့ထွက်အဆုပ် ကင်ဆာကလဲ နို့ထဲမှာရာ တခြားနေရာတွေကိုပါ ပြန့်မယ်။ အဖြစ်မများပေမဲ့ ဆိုးတာဘဲ။
(၃) Breast Tests ရင်သားကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်းများ
• Physical Exam ရင်သားကို ရိုးရိုးစစ်ဆေးခြင်း = ကိုယ်တိုင်စမ်းတာကနေစပြီး ဆရာဝန်မျက်စိနဲ့၊ လက်နဲ့ စစ်ဆေးတာကနေ စရမယ်။ အရွယ်အစားရော တွဲကျနေမှုရော ဘယ်-ညာ တူပါသလား၊ ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာ အပေါ်အရေပြား ပြောင်းနေတာ၊ အကျိတ်တွေ့ရင် နေရာ၊ အရွယ်အစား၊ ပုံပန်း၊ ရွေ့ ရ-မရ၊ နာ-မနာ၊ အပြော့-အမာ။ နို့သီးအဖျားက တခုခုထွက်နေသလား၊ ချိုင်းမှာကော တက်စိတွေ ရှိနေသလား။
• Mammogram (မင်မိုဂရမ်) = Low-dose X-rays ဓါတ်မှန်ရောင်ခြည် အပြော့စားသုံးတယ်။ အမျိုးသမီးတိုင်းကို ပုံမှန်စစ်နေတာအတွက်ရော၊ သေခြာချင်လို့ရောအတွက်ပါ သုံးတယ်။
• Digital mammogram (ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်-မင်မိုဂရမ်) = (ဒေတာ) ကိန်းဂဏန်းတွေကို လုပ်ယူဖေါ်ပေးနိုင်တဲ့ ကွန်ပြုတာသုံးတယ်။ ပိုတိကျတယ်။
• Diagnostic mammogram ရောဂါရှာ (မင်မိုဂရမ်) = ရင်သားမှာ မူမှန်မဟုတ် ဖြစ်နေတာတွေကို ပိုသိစေနိုင်တယ်။
• Breast ultrasound (အာလ်ထွာဆောင်း) (ဖရီကွင်စီ) များလှတဲ့ အသံလှိုင်းကိုသုံးတယ်။ ဓါတ်ရောင်ခြည် မပါဘူး။ အသံလှိုင်ကိုပုံဖေါ်ယူတယ်။ အကျိတ်ထဲမှာ အရည်ရှိနေသလား။ အခဲလား သိစေမယ်။
• Breast magnetic resonance imaging (MRI scan) = (အမ်-အာရ်-အိုင်) သံလိုက် နဲ့ ကွန်ပြူတာသုံးတယ်။ အသေးစိတ် ပုံဖေါ်နိုင်တယ်။ နေရာတိုင်းတော့ မသုံးဘူး။
• Breast biopsy (ဘိုင်အော့်ပ်စီ) အသားစဖြတ်ယူစစ်ဆေးခြင်း = သံသယရှိတဲ့နေရာက (တစ်ရှူး) ကိုဖြတ်ယူပြီး အသေအခြာစစ်ဆေးတယ်။ ကင်ဆာ ဟုတ်တာ-မဟုတ်တာ အတိအကျ သိရမယ်။
• Fine needle aspiration (FNA) breast biopsy အပ်သေးလေးနဲ့စုပ်ယူစစ်ဆေးခြင်း = မကောင်းဘူးထင်တဲ့ နေရာကို အင်မတန်သေးတဲ့ ဆေးထိုးအပ်ထိုးပြီး အထဲက စုပ်ယူလို့ရတာကို မှန်ဘီလူးနဲ့ စစ်ဆေးတယ်။
• Core needle breast biopsy အပ်ကြီးတာနဲ့ စုပ်ယူစစ်ဆေးခြင်း = မကောင်းဘူးထင်တဲ့နေရာကို အခေါင်းကျယ်တဲ့ အပ်ထိုးပြီး အထဲကစုပ်ယူလို့ရတာကို မှန်ဘီလူးနဲ့ စစ်ဆေးတယ်။
• Stereotactic breast biopsy = ကွန်ပြူတာသုံးတယ်။
• Surgical biopsy = ခွဲစိတ်နည်းနဲ့ အသားစဖြတ်ယူစစ်ဆေးတယ်။
• Sentinel node biopsy = ရောဂါဖြစ်နေတာကိုသိမယ်။ လိုအပ်ရင်ဖြတ်ထုတ်ယူမယ်။ တက်စေ့ကိုလဲ လုပ်နိုင်တယ်။
• Ductogram (galactogram) နို့ပြွန်ကိုစစ်ဆေးခြင်း = ပလပ်စတစ်ပြွန်သေးလေးသုံးတယ်။ နို့သီအဖျား နို့ထွက်ပြွန်အဝကနေထည့်မယ်။ ဆေးရည်ထိုးသွင်းမယ်။ နို့ကနေသွေးထွက်တာ ဘာလို့လဲဆိုတာ သိလာစေမယ်။
• Nipple smear နို့ကနေထွက်တာကို စစ်ဆေးခြင်း = သွေးဖြစ်ဖြစ်၊ အရည်ဖြစ်ဖြစ်ထဲမှာ ကင်ဆာ-ဆဲလ်တွေ ပါနေ-မနေစစ်မယ်။
• Ductal lavage နို့ပြွန်ဆေးကြောခြင်း = သန့်တဲ့ဆားရည်ကို နို့ပြွန်အကနေထိုးပေးပြီး ထွက်လာတာထဲမှာ ကင်ဆာ-ဆဲလ်တွေ ပါနေ-မနေစစ်မယ်။
ကျွန်တော် နယူးဒေလီမှာ မြန်မာပြည်ကဒုက္ခသည်တွေအတွက် ယမုန်နာဆေးခန်းလေးဖွင့်ခဲ့စဉ်က ခွဲစိတ်လူနာစာရင်းကို ပြန်ရှာပါတယ်။ ခွဲစိတ်လူနာစာရင်းရှည်ကြီးထဲက အထက်ပိုင်း ၅ဝဝ ထဲမှာ Fibroadenoma ခေါ် ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ရင်သားအကျိတ်လူနာ ၈ ယောက်ကိုတွေ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ပဌမဆုံးလူနာကိုခွဲပေးခဲ့တာ ဒီစာကိုရေးတော့ ၁၁ နှစ်ရှိပြီ။ တယောက်မှ ကင်ဆာမဖြစ်တာသေချာတယ်။
နံပါတ်စဉ် နေ့စွဲ အမည် အသက် ရောဂါ ခွဲစိတ်နည်း ထုံဆေး-မေ့ဆေး
5. 11/5/05 Ms ….. 20 F F/A Rt. breast Excision LA
10. 29/9/06 Ms ….. 30 F F/A Lt. Breast Excision LA
14. 18/10/06 Ms ….. 20 F F/A Rt. Breast Excision LA
37. 22/3/07 Ms ….. 30 F F/A Breast Lt Excision LA
127. 3/4/08 Ms ….. 18 F F/A Rt. Breast Excision LA
195. 5/9/08 Ms ….. 24 F F/A Rt. breast Excision LA
231. 6/12/08 Ms ….. 21 F F/A Breast Ft Excision LA
364. 16/7/09 Ms ….. 17 F F/A Rt. breast Excision LA
ခွဲရင်တော့ အလှအပအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာဖြစ်လို့ အတွေ့အကြုံများတဲ့ဆရာဝန်နဲ့သာ သင့်ပါမယ်။ ချုပ်ရိုးကနေ အရုပ်မဆိုးစေဘို့ဖြစ်ပါတယ်။